Afar talo oo lagu daaweeyo Calool istaagga carruurta | Bezzia
Afar Talooyin oo lagu daaweeyo Calool istaagga carruurta
Maria Jose Roldan | 09/04/2021 22:00 | Wiilkaaga
Calool istaagku waa dhibaato xagga dheef-shiid kiimikaadka ah oo carruurta ku dhacda. Xusuusnow in xiidmahaagu ay weli soo korayaan oo ay caadi tahay, sidaa darteed, in marba marka ka dambaysa ay soo bandhigto dhibaato noocan oo kale ah oo aan dhammeyn nuugista nafaqooyinka kala duwan ee cuntada si wanaagsan u leh. Waxa caadiga ah ayaa ah in calool fadhiga la xallin karo iyada oo aan dhibaato badani jirin oo uu baaba'o sidii uu ku yimid.
Si kastaba ha noqotee, haddii calool-fadhigu sii socdo wakhti ka dib, waxaa muhiim ah in la arko dhakhtar si loo hubiyo haddii aad ku xanuunsanayso nooc kasta oo cuduro ah. Kadib waxaan soo jeedineynaa taxane daaweyn ah ama talooyin ka caawin kara kan yar xallinta dhibaatadiisa dheefshiidka.
1 Kordhi cabitaankaaga
2 Biyo badan cab
3 Ciyaar isboorti
4 Qaadashada waxyaabaha caanaha laga sameeyay
Fibre waa fure waana lama huraan markay tahay kahortaga cunugga calool istaaga. Fiberku kama maqnaan karo cunnooyinka cunugga waana in si joogto ah loogu qaataa dhammaan cuntooyinka. Waxay ku jirtaa miraha sida tufaaxa ama kiwi, khudradda ama badarka. Caadi ahaan, yeelashada cunno ay hodan ku tahay faybarku waxay caawisaa dhibaatooyinka caloosha ee kaladuwan inay baaba'aan.
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah marka laga hadlayo ka hortagga cunuga calool fadhiga waa inuu cabo biyo maalintii oo dhan. Aad ayey muhiim u tahay in ilmuhu uu ahaado mid sifiican biyaysan markasta oo ha soo bandhigin dareere la'aan. Qaadashada biyaha waxay saxarada ka caawisaa inay jilicsanaato banaanka ayeyna u bixi kartaa dhibaato la'aan. Cabitaanka lagu taliyay waa inuu ahaado biyo, iyo qaadashada cabitaannada sonkorta leh ama casiirka laguma talinayo maadaama aysan wax wanaag ah ku soo kordhinayn jirka.
Jimicsi joogto ah ayaa ka hortaga calool istaagga. Dhaqdhaqaaqa jidhku wuxuu ka caawiyaa xaarka saxaarada inuu ku soo dego mindhicirka oo dhan dhibaato la'aan iyo inuu saxarada ka saaro si qancisa. Intaas waxaa sii dheer, cayaaraha isboortiga waxay muhiim u yihiin canugga inuu dareemo naftiisa wanaag iskana ilaaliyo dhibaatooyinka kiilada dheeraadka ah.
Qaadashada waxyaabaha caanaha laga sameeyay
Mid ka mid ah sababaha calool fadhiga ee carruurta ayaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay la'aanta probiotics-ka nidaamka dheef-shiidka. Bakteeriyadaani waxay ku jirtaa cuntooyinka khamiirka leh waxayna gacan ka geysanayaan inay soo nuugaan nafaqooyinka kala duwan ee laga helo habka dheef-shiidka.
Guud ahaan Calool istaagga carruurta waxaa lagu xalliyaa iyadoo la raacayo taxanahan talooyinka ama daaweynta dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa dhici karta in dhibaatadu sii socoto inkasta oo la raaco talooyinkaas. Hadday taasi dhacdo, waalidiintu waa inay u tagaan dhakhtarka si ay u ogaadaan sababta calool fadhigu u sii socdo ama u sii jiro, halkaasna looga dhaqmo sida ugu habboon ee ugu macquulsan. Xaaladaha noocaas ah, canugga waxaa ku dhici kara nooc ka mid ah cudurada wadnaha oo ka hor istaagaya inuu ku sii maro marinka xiidmaha ee caadiga ah. Dhibaatadan dheef-shiidka inta badan waxaa lagu xaliyaa iyadoo la maamulo daawooyinka qaarkood oo ka caawiya habka dheef-shiidka inuu noqdo mid ku habboon. Haddii kale, midka yar waxaa laga yaabaa inuu yeesho dhacdooyin calool fadhiga si isdaba joog ah oo leh dhammaan xumaanta ay tan ku leedahay heerka caafimaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Wiilkaaga » Afar Talooyin oo lagu daaweeyo Calool istaagga carruurta
Waxaan ka wareysaneynaa Qashinka Zero, Dukaankaaga khadka tooska ah ee nolosha waarta
5 dhir dheer oo gudaha ah si loo qurxiyo geesaha gurigaaga